Qalabka iibinta ugu sareeya – CRS-206C tijaabiyaha cirbadaha tareenka guud
CRS-206C tijaabiyaha cirbadaha tareenka guud wuxuu tijaabin karaa irbadaha tareenka guud ee BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO iyo sidoo kale cirbadaha piezo. BIP functin, shaqada QR code ayaa la heli karaa. Nidaamka hawlgalka Windows, nidaamka hawlgalka Linux labadaba waa la heli karaa.
Bilowgii 2021, waxaan bilownay nooc cusub oo ah keydka baaritaanka HU-200. HU-200 tijaabada EUI / EUP iyo HEUI. waxaa ka mid ah EUI / EUP of BOSCH, CUMMINS, DELPHI, CAT, VOLVO, SCANIA, iwm. xogta si otomaatig ah ayaa loo barbardhigayaa loona tirtiraa 19 "shaashadda LCD. Kursiga tijaabada ah wuxuu qaataa isbeddellada calaamadaha wadista, saxsanaanta xakamaynta ayaa sarraysa, hawlgalku waa mid lagu kalsoonaan karo oo xasilloon ...
dallacsiinta qaybaha dayactirka ee bosch, sicir-dhimistaan ​​ayaa noo weyn. Ku soo dhawow inaad iibsato 100% bosch asal ah, 100% cusub. Nambarada dallacaadaha F00RJ01278 F00RJ01714 F00RJ02429 F00RJ01428 F00RJ01479 F00VC01329 0445116034 0445116064 0445010832 1110010013 0281006246 0281006245 F00VC99002 F00RJ02177
326-4700 CAT cirbadeynta, lagu sameeyay Shiinaha, qiimo dhimis iib ah.
Cirbadaha CAT lagu sameeyay shiinaha, tayo sare leh, dallacsiin iib ah. Nambarka nambarka 326-4700 326-4756 10R7575 320-0680 2645A474 320-0690 2645A749 320-4740 2645A738 2645A745 2645A751 2645A753 321-3600 320-3800 10R7938 hadii aad ubaahantahay nambarka kale ee nambarka, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.